कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण अन्तिम चरणमा
काठमाडौं – संघ, प्रदेशमा कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गर्ने सरकारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ । संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजन कार्यलाई अघि बढाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेशमा कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गर्न लागेको हो । संघ, प्रदेशमा रहने दरबन्दी निर्धारण कार्यलाई अन्तिम स्वरुप दिएपछि हाल कर्मचारीको अन्तरिम समायोजनमा भएको सकसको […]
बुधबार, असार २७, २०७५
धरापमा राजमार्गका पुल, यात्रु दैनिक सास्ती खेप्न बाध्य
दैनिक ३ हजार बढी सवारीसाधन गुड्ने पुर्व—पश्चिम राजमार्गअन्र्तगत पथलैया निजगढ खण्डको दुधौरा पुल दुई पटक भासियो — पहिलो पटक २०७१ साउनमा र दोस्रो पटक २०७४ साउनमा । पुलन सञ्चालनमा आउन करिव डेढ महिना लाग्यो डाईभर्सन बनाएर अस्थायी रुपमा सवारी साधान सञ्चालन गरियो । यात्रु दैनिक सास्ती खेप्न बाध्य भए । मालवाहक सवारी साधन सडकमै रोकिए […]
विदेशी पर्यटकले दैनिक कति खर्च गर्छन् ?
काठमाडौं – नेपाल आएका विदेशी पर्यटकले दैनिक कति खर्च गर्छन् ? पर्यटन मन्त्रालयका पूर्व सचिव किशोर थापाले शनिबार पेस गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा विदेशीको दैनिक खर्च औसतमा ५३ डलर मात्र छ । थापाको भनाइमा यो खर्च निकैकम हो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको छ । पर्यटक खर्च बढाउन के गर्ने त ? थापा भन्छन्ः -पर्यटक […]
‘वार्ता गर्न जुम्ला आउ, जनता र विद्यार्थीमारा विधेयक आउन दिइँदैन’
चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग राखी ११ दिनदेखि आामरण अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीले आफुसँग वार्ता गर्न चाहे सरकार जुम्ला आउनुपर्ने बताएका छन् । आफुले उठाएको माग नागरिक र विद्यार्थीको पक्षमा भएकाले सरकारले सम्बोधन गरे पुग्ने उनले बताए । सरकारले वार्ता गर्न आवश्यक नै छैन, माथेमा प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक लागु गरे पुग्छ, उनले […]
सुनकेशरीले भुलिछन् मातृभाषा ! ९ वर्षपछि परिवारसँग मिलन
नौ वर्षदेखि कुवेतमा रहेकी ३१ वर्षीया सुनकेशरी गुरुङले मातृभाषा नै बिर्सिन् । तर, उनको परिवारले उनलाई बिर्सिएको थिएन । कुवेत गएदेखि नै परिवारको सम्पर्कमा नरहेकी सुनकेशरी सोमबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थलमा आफूलाई लिन आइपुगेका दाजुभाइको आमुन्नेसामुन्ने भइन्, उनले पुरानो लवजमा बोल्न सकिनन् । बिस्तारै आफ्नो भाषा र शब्द बिर्सिंदै गएकी उनले बोलेका सबै शब्द अरबी भाषाका […]
राजदूत नियुक्तिको मापदण्डः आउलान् अब्बल कूटनीतिज्ञ ?
एकैपटक धेरै मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गर्नुपर्ने भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले अघि बढाउने मुख्य कामझैं बनेको छ, ‘राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड’ । यसपटक पनि सरकारले राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड तय गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले अघिल्ला सुझावलाई हेरेर तयार गरेको उक्त मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार पास गरेको हो। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड अहिलेसम्म जति बने, सबै एउटै प्रकारका छन्। हरेक मापदण्ड […]
लाईसेन्स छपाईमा चरम लापरबाही
लाईसेन्स छपाईमा चरम लापरबाहीयातायात व्यवस्था विभाग कार्यालय ठुलो भर्याङले ट्रायल पास गरेर नयाँ लाइसेन्स र नवीकरणका लागि निवेदन दिएकाको फोटो धमिलो भएको भन्दै पुनः खिचाउन अनुरोध गरेको छ । ठुलो भर्याङस्थित कार्यालयबाट २०७४ भदौदेखि चैतसम्म खिचिएको फोटोमा यस्तो समस्या आएको कार्यालयले जनाएको हो । कार्यालयले असार १९ मा बायोमेट्रिक लाईसेन्स जारी गर्दा फोटो धमिलो आउने […]
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग नेपालका लागि जापानका राजदूत मासाचिमी सिगो ले शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित अध्यक्ष तिमिल्सिनाको कार्यकक्षमा भएको भेटमा नेपाल र जापान बीचको कुटनीतिक सम्बन्ध सधै सुमधुर रहेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । उहाँले नेपाल लामो संक्रमणपछि शान्ति र विकासतर्फ अगाडि बढेकाले विगतमा जस्तै आगामी दिनमा पनि जापानको सहयोग निरन्तर […]
हत्यामा संग्लग्न तीन जना १५ दिनपछि पक्राउ
आविद हुसेन/पर्सा । वीरगंजको गहवाका भिखारी रामको हत्यामा संलग्न तीन जनालाई पर्सा प्रहरीले १५ दिनपछि पक्राउ गरि आज सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा कलैया घरभई वीरगंज बस्दै आएका ४० वर्षीय महजिद मिया हजाम, सर्लाही बरथवा १० का ४२ वर्षीय भरत थापा र पोखरा महानगरपालिका १ का २९ वर्षीय बिजय नेपाली रहेको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक […]
डा. केसीका माग हुबहु सम्बोधन गर्ने माग गलत– देव गुरुङ
काठमाडौँ । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले गोबिन्द केसीले उठाएका मागहरु हुबहु सम्बोधन गर्नु पर्छ भन्ने भनाई गलत भएको बताउनु भएको छ । आज भक्तपुरमा भएको उक कार्यक्रममा गुरुङले केही मागहरु जायज भए पनि केसीले भने जस्तै हुबहु सम्बोधन नहुने भन्दै त्यसलाई जनाताको सर्वोच्च निकाय संसदले सम्बोधन गर्ने बताउनु भयो । चिकित्सा बिधेक बारे जुम्लामा […]
थप २५९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १ जनाको मृत्यु
नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ बाट बच्न सरकाले थाल्यो तयारी
सेयर बजारमा २१.४८ अंकको गिरावट, ४ अर्ब ८९ लाख बरावरको कारोबार
मोरङमा आमा र बहिनीको कुटपिटबाट एक जनाको मृत्यु
कांग्रेस जनसम्पर्क समिति बेलायतमा एकैपटक चार सभापति
कांग्रेस काठमाडौँका सभापतिमा बानियाँ निर्वाचित
कांग्रेस महाधिवेशनमा विदेशी नागरिकतामाथि कडाई
झापामा बस दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, २३ घाइते
माओवादी केन्द्र लिम्चुङबुङ गाउँपालिका अध्यक्षमा मेजरकुमार राई
अफ्रिकी नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा निषेध
फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, चाँडै घटाउन सत्तारुढ दलकै नेताको आह्वान
ट्युसन पढ्न जादा १६ वर्षीया किशोरी बलात्कृत
भैंसीको मासुले गाउँ नै आतंकित
चिनियाँ ठेकेदारलाई कुलमानको चेतावनी